Galmada gabdhaha cayilan iyo kuwa caatada ah midee ayaa raaxo badan? | Raganimo University
Galmada gabdhaha cayilan iyo kuwa caatada ah midee ayaa raaxo badan?
February 10, 2019~1 minute
Dooqa raggu waa kala duwanyahay marka ay timaado raaxada galmada. Laakiin marka la eego shacabka aduunka, qaarada Afrika ayaa qaasatan raggu jecelyihiin dumarka culus marka loo barbar dhigo kuwa caatada ah. Balse cayilka saa'idka ah laftiisu dhibaato ayuu leeyahay marka sariirta la joogo.
Ragga madoow waxay jecelyiin dumarka xoogaa jirka leh. Oo doolaha iyo naasaha waaweyn leh. Dumarka caatada ah horta iyaga raggu ma jecla. Sababtuna waxay tahay in marka sariirta la joogo aysan raaxo fiican lahayn. Qeyb weyn oo galmada ka mid ah waa in aad ku raaxaysan karto jirka xaaska ama sayga. Dumarka aan hilibka lahayn oo lafahooda ay dibada yaalaan way adagtahay in lagu raaxaysto jirkooda. Ragga caatada ah laftoodu waa la mid.
Dhinca kale, dumarka aadka u cayilan ee culus laftoodu waxay u baahanyihiin awood dheeri ah in sariirta lagu maamulo. Qaasatan haddii ay gabadhu doonayso in ay dusha ka fuusho ninka waxaa macquul ah in ninka ay dhib ku noqoto in uu qaado culaabteeda. Ragga qaar waxay sidoo kale jecelyihiin in gabadha ay xambaaraan oo xitaa ay istaaga ugu galmoodaan. Haddii gabadhu ay aad u culustahay dhinacyada galmada qaarkood ayaa laga yaabaa in ay suurto gali waydo. Sidoo kale, ragga guska yar ayay ku adagtahay galmada dumarka cayilan oo laga yaabo in uu la gaari waayo.
Waxkasta waxay ku fiicanyihiin dhexdhexaadka. Galmaduna waxay ku macaantahay gabadha culeyskeedu uu yahay mid dhexdhexaad ah, oo aan saa'id ahayn isla markaana aan caato ahayn.